पाल्पामा जिप दुर्घटनामा परी एकको मृत्यु, दुई घाइते – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
पाल्पामा जिप दुर्घटनामा परी एकको मृत्यु, दुई घाइते
२२ बैशाख २०७९, बिहीबार १८:४७
रामचन्द्र रायमाझी/पाल्पा । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-५ चरचरेस्थित सिद्धार्थ राजमार्गमा जिप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, दुई घाइते भएका छन् । वबहीबार दिउँसो बुटबलबाट रामपुरतर्फ आउँदै गरेको लु.१ च. ७७८० नम्वरको डबल क्याप जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको ज्यान गएको छ भने दुई जना घाइते भएका हुन् ।
दुर्घटनामा जिप धनी रामपुर नगरपालिका-३ का ४३ वर्षीय सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक बिरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परी चालक निस्दी गाउँपालिकाका २७ वर्षीय खेमबहादुर खाम्चा र रामपुर नगरपालिका-३ का ४६ वर्षीय टुक नारायण श्रेष्ठ घाइते हुनुभएको छ ।
श्रेष्ठको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने खाम्चाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते दुवै जनालाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास पठाइएको छ । जिप आफै अनियन्त्रित भई सडकदेखि तीन सय मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
माओवादीले मात्रै नैतिकता र त्यागको संस्कार
राष्ट्रिय खुला पुम्सेमा निशालाई
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति
भरतपुरका बागी जगन्नाथ र
एनएमबी र वैकल्पिक ऊर्जाबीच